Iindaba -Ubungakanani bemakethi kwihlabathi jikelele kumzi mveliso wenguqu ziya kudlula kwi-100 yezigidigidi ngo-2020
Kwiminyaka yakutshanje, ukuhanjiswa kwamandla kunye nokusasazwa kwezixhobo kwimarike ngokubanzi kuyanda.
Ukwanda kwezityalo, ukukhula koqoqosho kunye nemfuno yamandla kumazwe asahlumayo kuya kuqhuba imarike yenguqu yamandla kwihlabathi ukusuka kwi- $ 10.3 yezigidigidi ngo-2013 ukuya kwi- $ 19.7 yezigidigidi ngo-2020, ngomgangatho wokukhula ngonyaka weepesenti ze-9.6, ngokwamaziko ophando.
Ukukhula ngokukhawuleza kwemfuno yamandla e-China, India nase-Middle East ngoyena mqhubi uphambili wokukhula okulindelekileyo kwimakethi yenguqu yamandla ehlabathi. kwimarike.
"I-GRID yase-UK sele ihlupheke kakhulu kwaye kungenxa yokutshintsha kunye nokuphucula igridi ilizwe eliya kuthi likwazi ukunqanda ukucinywa kombane. Ngokufanayo, kwamanye amazwe aseYurophu, afana neJamani, kukho ukulungiswa okuqhubekayo kwigridi nakwizinto zombane. Ukuqinisekisa ubonelelo lombane. "Batsho njalo abanye abahlalutyi.
Ngokoluvo lweengcali, zimbini izinto ezinokukhula ngamandla kwisantya sentengiso esiguquliweyo. Kwelinye icala, ukuphuculwa kunye nokuguqulwa kweenguqu zemveli kuya kuvelisa isabelo esikhulu semarike, kwaye ukupheliswa kweemveliso ezibuya umva kunokukhuthaza uphuhliso olusebenzayo lokubhida kunye neethenda, kwaye izibonelelo ezinkulu zoqoqosho ziya kuvela.
Kwelinye icala, uphando kunye nophuhliso, ukuvelisa, ukuthengisa, ukusetyenziswa kunye nolondolozo lokonga umbane kunye neenguqu ezinengqondo ziya kuba zezona ziqhelekileyo, kwaye iimveliso ezintsha ngokuqinisekileyo ziya kuzisa amathuba amatsha ophuhliso kushishino.
Ngapha koko, umzi mveliso wokuguqula izinto uxhomekeke kutyalo-mali oluvela kumashishini asezantsi ezinje ngombane, igridi yamandla, isinyithi, ishishini le-petrochemical, uloliwe, ulwakhiwo lweedolophu njalo njalo.
Kule minyaka idlulileyo, ukuxhamla kuphuhliso olukhawulezileyo loqoqosho lwesizwe, utyalo-mali kulwakhiwo lonikezelo lwamandla kunye negridi yamandla ibisanda, kunye nemfuno yentengiso yezixhobo zokuhambisa kunye nokusasaza inyuke kakhulu. Kulindeleke ukuba imfuno yentengiso yasekhaya yesiguquli kunye nezinye izixhobo zokuhambisa kunye nokusasaza ziya kuhlala zikwinqanaba eliphezulu ixesha elide elizayo.
Kwangelo xesha, iziko lomsebenzi womxhuzulane wombuso kunye nesicwangciso-qhinga sophuhliso kumzi mveliso wamandla ombane unefuthe elibonakalayo, ukuhanjiswa kwenethiwekhi oomatshini kunye nokuphunyezwa komsebenzi wokuphinda usebenze kuya kuqhuba imfuno yentengiso yenguqu, ukubiza ixabiso kuya kulonyusa kakhulu inani Iyonke intengiso yenguqu kwintengiso yehlabathi ngokuthe ngcembe ithambekele ngase China, ukusetyenziswa kweemveliso zokusika kulindeleke ukuba kufezekise iziphumo ezingcono e China.